Fiilada degdegga ah ee fiilada USB C waxay ku timaaddaa Apple Watch cusub | Wararka IPhone
Cupertino waxay sii wadaan inay iska caabiyaan hirgelinta dekadda USB C ee iPhone -ka, dhammaanteen waxaan sugeynaa hirgelintiisa laakiin waxba ma ahan ... Aad bay u fiicnaan lahayd in hal deked laga helo dhammaan aaladaha Apple laakiin hadda imaatinka USB C wuxuu noqonayaa mid wax ku ool u ah badeecada inteeda kale oo kiiskan wuxuu ahaa Apple Watch Series 7, sidoo kale si dhaqso leh ayuu u dallacay.
Haa, moodooyinka cusub ee Apple Watch waxay ku daraan nidaam lacag -bixin degdeg ah kaas oo adeegsaduhu awoodo haysato 80% nolosha batteriga 45 daqiiqo gudahood. Taas macnaheedu waa in saacadaha cusubi hadda u oggolaanayaan in aaladda si buuxda loogu dallaco 33% si ka dhaqso badan moodooyinkii hore.
Madaxbannaanid wanaagsan iyo ku dallacsi dhakhso leh USB C
Waxa ugu fiican oo dhan ayaa ah in hadda Apple Watch -ka cusub uu bixiyo nolosha batteriga illaa 18 saacadood marka loo eego Apple lafteeda oo lagu daray xawaaraha ku dallacidda fiilada cusub ee USB C waxaan leenahay isku -darka ugu fiican. Dhinaca kale, waxaa muhiim ah in la ogaado in fiilada USB C -gaan si gooni ah loo iibiyo iyo waxay si buuxda ula jaanqaadaysaa inta ka hartay Apple Watch ilaa Taxanaha 1 laakiin si dhaqso leh ugama qaadi doontid.
Ku -dallacsiinta Apple Watch waa dabayl. Waana ilaa 33% ka dhakhso badan Apple Watch Series 7, kaas oo gaari kara 80% lacag qiyaastii 45 daqiiqo ah. Kaliya waa inaad isku -xiraha u soo dhoweysaa wejiga gudaha ee saacadda oo birlabladu ay wax walba daryeelaan. Waa nidaam gabi ahaanba shaabadeysan oo aan wax xiriir ah la soo bandhigin. Aad bay u fiican tahay, maxaa yeelay xitaa uma baahnid isku -dheelitirnaan dhammaystiran. Ku -dallacsiinta degdegga ah waxaa kaliya lagu taageeraa taxanaha Apple Watch 7. Moodooyinka kale waxay qaataan waqtiga caadiga ah.
Fiilada magnetic -ka cusub ee dhaqsaha badan leh ee leh isku xiraha USB C ee Apple Watch Waxay leedahay dherer ah 1 m iyo qiimo dukaanka Apple oo ah 35 euro. Waqtigan xaadirka ah intaan qoreyno maqaalkan, haddii aad hadda soo iibsato fiilada, waxay imaan doontaa 17 -ka Sebtember, waxaan u malayneynaa in kaydku kori doono toddobaadyada dhoofinta degdegga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Fiilada degdegga ah ee fiilada USB C waxay ku timaaddaa Apple Watch cusub